Luka 20 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Luka Asɛmpa 20:1-47
Wobisaa baabi a Yesu nyaa ne tumi fii (1-8)
Akuafo awudifo ho mfatoho no (9-19)
Onyankopɔn ne Kaesare (20-26)
Owusɔre ho asɛmmisa (27-40)
Kristo yɛ Dawid ba anaa? (41-44)
Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnhwɛ yiye wɔ akyerɛwfo no ho (45-47)
20 Da koro bi a na ɔrekyerɛkyerɛ nkurɔfo wɔ asɔrefi hɔ a na ɔreka asɛmpa no, asɔfo mpanyin no ne akyerɛwfo ne mpanyimfo no bae, 2 na wobebisaa no sɛ: “Ka kyerɛ yɛn, tumi bɛn na wode yɛ eyinom? Na hena na ɔmaa wo saa tumi yi?”+ 3 Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Me nso, mebisa mo asɛm bi. Monka nkyerɛ me: 4 Tumi a Yohane de bɔɔ asu no, efi soro anaasɛ efi nnipa?”* 5 Ɛnna wosusuw ho sɛ: “Sɛ yɛka sɛ, ‘Efi soro’ a, ɔbɛka sɛ, ‘Adɛn nti na moannye no anni?’ 6 Na sɛ yɛka sɛ, ‘Efi nnipa’ a, nkurɔfo no nyinaa besiw yɛn abo, efisɛ wogye tom* sɛ Yohane yɛ odiyifo.”+ 7 Enti wobuae sɛ wonnim baabi a efi. 8 Na Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛnde me nso, merenka tumi a mede yɛ eyinom nkyerɛ mo.” 9 Afei ofii ase yɛɛ mfatoho yi kyerɛɛ nkurɔfo no sɛ: “Ɔbarima bi yɛɛ bobefuw*+ de gyaw akuafo bi, na otuu kwan kodii bere tenten.+ 10 Na bere* dui no, ɔsomaa akoa bi kɔɔ akuafo no nkyɛn sɛ onkogye bobefuw no mu aba no bi mmra. Nanso akuafo no hwee no, na wɔpam no a wɔamma no hwee.+ 11 Na ɔsan somaa akoa foforo kɔɔ wɔn nkyɛn. Ɔno nso, wɔhwee no guu n’anim ase, na wɔpam no a wɔamma no hwee. 12 Afei ɔsan somaa nea ɔto so abiɛsa; oyi nso wopirapiraa no, na wɔpam no. 13 Enti bobefuw wura no kae sɛ, ‘Dɛn na menyɛ? Mɛsoma me ba a medɔ no no.+ Oyi de, ebia wɔbɛfɛre no.’ 14 Bere a akuafo no ani bɔɔ no so no, wofii ase susuw ho sɛ, ‘Oyi na obedi ade no. Momma yenkum no, na agyapade no bɛba abɛyɛ yɛn dea.’ 15 Ɛnna wɔtwee no fii bobefuw no mu kokum no.+ Enti dɛn na bobefuw wura no bɛyɛ wɔn? 16 Ɔbɛba abekunkum akuafo no, na ɔde bobefuw no ama nnipa foforo.” Bere a wɔtee eyi no, wɔkae sɛ: “Ɛremma saa da!” 17 Na ɔhwɛɛ wɔn anim kae sɛ: “Ɛnde, asɛm a wɔakyerɛw sɛ: ‘Ɔbo a adansifo poe no, ɛno na abɛyɛ ntwea so bo titiriw* no,’+ dɛn na ɛkyerɛ? 18 Obiara a ɔbɛhwe saa ɔbo no so no, obebubu pasapasa.+ Na obiara a ɛbɛhwe no so de, ɛbɛyam no.” 19 Ná akyerɛwfo ne asɔfo mpanyin no pɛ sɛ wɔkyere no saa bere no ara, efisɛ wohui sɛ wɔn nti na ɔyɛɛ mfatoho yi,+ nanso na wosuro nkurɔfo no. 20 Enti wɔtetɛw no.* Afei wɔsomaa mmarima bi a na wɔabɔ wɔn paa kokoam sɛ wɔnyɛ wɔn ho sɛ atreneefo, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛka asɛm bi ama wɔanya no,+ na wɔde no ahyɛ aban ne amrado no nsa. 21 Na wobisaa no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, yenim sɛ wo nsɛm ne wo nkyerɛkyerɛ yɛ nokware; wonhwɛ nnipa anim, na nea wokyerɛkyerɛ fa Onyankopɔn ho no yɛ nokware. 22 Mmara ma kwan* sɛ yetua tow ma Kaesare anaasɛ ɛmma kwan?”* 23 Nanso ohuu wɔn nnaadaasɛm no, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: 24 “Momfa denare* mmɛkyerɛ me. Hena mfoni ne ne nkyerɛwee na ɛwɔ so yi?” Wɔkae sɛ: “Kaesare dea.” 25 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛnde, sɛnea ɛte biara no, muntua Kaesare de mma Kaesare,+ na muntua Onyankopɔn de mma Onyankopɔn.”+ 26 Na wɔannya biribiara wɔ ne kasa mu amfa annya no wɔ nkurɔfo no anim. Mmom ne mmuae no maa wɔn ho dwiriw wɔn, na wɔyɛɛ komm. 27 Nanso Sadukifo a wɔka sɛ owusɔre nni hɔ+ no mu bi bae, na wobisaa no sɛ:+ 28 “Ɔkyerɛkyerɛfo, Mose kyerɛw maa yɛn sɛ, ‘Sɛ ɔbarima bi nua wu gyaw ne yere na sɛ onni ba a, ɛsɛ sɛ ɔbarima no ware ne nua a wawu no yere no, na ɔne no wo ma ne nua no.’+ 29 Ná anuanom baason* bi wɔ hɔ. Nea odi kan no waree, nanso owui a wanwo ba. 30 Enti nea ɔto so abien 31 ne nea ɔto so abiɛsa no waree ɔbea no bi. Baason no nyinaa yɛɛ saa ara; wowuwui a wɔannyaw mma wɔ wɔn akyi. 32 Awiei koraa no, ɔbea no nso wui. 33 Enti, owusɔre mu no, wɔn mu hena na ɔbea no bɛyɛ ne yere? Efisɛ nnipa baason no nyinaa waree no bi.” 34 Yesu buaa wɔn sɛ: “Wiase yi* mma de, wɔware na wɔde wɔn ma aware, 35 na wɔn a wɔabu wɔn sɛ wɔfata sɛ wɔtena wiase a ɛreba no mu ne wɔn a wobenyan afi awufo mu no de, wɔrenware, na wɔremfa wɔn mma aware.+ 36 Nokwasɛm ne sɛ, wɔrentumi nwu bio, efisɛ wɔbɛyɛ sɛ abɔfo, na esiane sɛ wɔyɛ owusɔre mma nti, wɔbɛyɛ Onyankopɔn mma. 37 Mose mpo daa no adi sɛ awufo bɛsɔre, efisɛ nwura* no ho asɛm no mu no, ɔfrɛɛ Yehowa* sɛ ‘Abraham Nyankopɔn ne Isak Nyankopɔn ne Yakob Nyankopɔn.’+ 38 Ɔnyɛ awufo Nyankopɔn, na mmom ateasefo de, efisɛ n’ani so de, wɔn nyinaa te ase.”*+ 39 Ɛnna akyerɛwfo no bi kae sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, woaka no yiye.” 40 Na wɔannya akokoduru ammisa no asɛm biara bio. 41 Afei ɔno nso bisaa wɔn sɛ: “Adɛn nti na wɔka sɛ Kristo no yɛ Dawid ba?+ 42 Efisɛ Dawid ankasa kae wɔ Nnwom nhoma no mu sɛ, ‘Yehowa* ka kyerɛɛ me Wura sɛ: “Tena me nsa nifa 43 kosi sɛ mede w’atamfo bɛyɛ wo nan ntiaso.”’+ 44 Enti, sɛ Dawid frɛɛ no Owura a, ɛnde ɛyɛɛ dɛn na ɔyɛ ne ba?” 45 Bere a nnipa no nyinaa retie no no, ɔka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: 46 “Monhwɛ yiye wɔ akyerɛwfo no ho. Nea wɔpɛ ne sɛ wɔbɛhyɛ ntaade atenten de akyinkyin, na wɔagye nkyia wɔ gua so. Wɔpɛ nkongua a ɛwɔ anim* wɔ hyiadan mu ne mpanyimfo tenabea wɔ apontow* ase.+ 47 Wɔn na wogye* akunafo afi,* na wɔbɔ mpae atenten sɛnea nnipa behu wɔn.* Saa nkurɔfo yi benya atemmu a emu yɛ den.”*
^ Anaa “nnipa na ɛde maa no?”
^ Anaa “wogye di.”
^ Kyerɛ sɛ, bere a wɔde twa bobe.
^ Anaa “wɔde wɔn ani dii n’akyi.”
^ Anaa “Ɛfata.”
^ Anaa “ɛmfata.”
^ Kyerɛ sɛ, mmarima baason.
^ Anaa “wɔn nyinaa te ase ma no.”
^ Anaa “wɔmemene.”
^ Anaa “agyapade.”
^ Anaa “nyaatwom nti, wɔbɔ mpae atenten.”
^ Anaa “emu yɛ duru.”